» को भन्दा को कम ? वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि कमेडी नै कमेडी वर्षा
को भन्दा को कम ? वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि कमेडी नै कमेडी वर्षा
९ माघ २०७६, बिहीबार १२:२२
मकवानपुर, ०९ माघ । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी प्रतियोगिता ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि १० जना प्रतियोगीहरुले प्रस्तुति दिएका छन् । उनीहरुमध्ये पर्फमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै ईटहरीका सुमन कोईराला उत्कृष्ट ७ मा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री भईसकेका छन् । सुमनसँगै प्रस्तुति दिएका अन्य प्रतियोगीहरुमध्ये अर्का एक जना प्रतियोगी भोटिङका आधारमा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री हुनेछन् । यस भिडियो सामग्रीमा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि भिडेका प्रतियोगीहरु र उनीहरुको प्रस्तुतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेरौँ भिडियो–
वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि पहिलो प्रस्तुति काठमाडौँका नम्रता गिरीले दिएकी थिईन् । नारियाका नामले समेत चिनिने नम्रताले नेपालका विभिन्न चाडपर्वहरुका बारेमा तिखो व्यङ्ग्य गरेकी थिईन् । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि दोस्रो प्रस्तुति असामका मोहनराज क्षेत्रीले दिएका थिए । मिमिक्री किङका रुपमा प्रसिद्धि कमाएका मोहनराजले गर्लफ्रेण्डका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि तेस्रो प्रस्तुति शोलुखुम्बुका कैलाश कार्कीले दिएका थिए । सायरी किङका रुपमा परिचित कैलाशले गरिबिका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिमा सन्तोष पन्त बाहेक तिनै जना निर्णायकहरुले स्टान्डिङ अवेसन दिएका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि चौथो प्रस्तुति नुवाकोटका गणेश राईले दिएका थिए । कमेडी च्याम्पियनमा विभिन्न विधामा प्रस्तुति दिएर हँसाउन सफल गणेशले शिक्षाका बेतिथिहरुका बारेमा ब्यङ्ग्य गरेका थिए । सुन्दर स्केच बनाउन सिपालु गणेशले हाँस्यव्यंग्यमा निकै दख्खल राख्ने गरेका छन् । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि पाँचौँ प्रस्तुति दार्जिलिङका अनिल राईले दिएका थिए । नेपालीहरु र विदेशीहरुबिचको भिन्नताका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि छैटौँ प्रस्तुति धरानकी सञ्जु कट्वालले दिएकी थिईन् । उमेर पुगेकी छोरी चेलीले समाजबाट सामना गर्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरुका बारेमा उनले व्यङ्ग्य गरेकी थिईन् ।
वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि सातौँ प्रस्तुति काठमाडौँका क्षितिज केसीले दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारलाई मुल विषय बनाएर आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि आठौँ प्रस्तुति धरानका प्रणेश गौतमले दिएका थिए । यस अघि उत्कृष्ट ७ बाट भोटिङमा पछि परेपछि उनी बाहिरिएका थिए । क्रियटिभ कमेडी गर्ने प्रणेशले वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि अलौकिक शक्तिका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि नवौँ प्रस्तुति रोल्पाका खड्गबहादुर पुन मगरले दिएका थिए । उनले कमेडी च्याम्पियनमा आफ्नो यात्राका बारेमा नै विषयवस्तु बनाएर व्यङ्ग्य गरेका थिए । वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि दशौँ तथा अन्तिम प्रस्तुति ईटहरीका सुमन कोईरालाले दिएका थिए । सुमन कोईराला अर्गानिक कमेडियनका रुपमा चिनिन्छन् । वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीको दाबेदारीका रुपमा प्रस्तुति दिँदा सुमनले जग्गा दलालीका रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा जग्गा दलाल, लेखापढी व्यवसायी र मिस नेपालदेखि नेपालका नेताहरुसम्मको व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिमा चारै जना निर्णायकहरुले स्टान्डिङ अवेसन दिएका थिए । उनी पर्फमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै उत्कृष्ट ७ मा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री भईसकेका छन् ।
यस अघि नै उत्कृष्ट ६ मा आदर्शकुमार मिश्रा, अमोग अर्याल, विष्णुप्रसाद गौदेल, हिमेश पन्त, सजन श्रेष्ठ र सुमन कार्की छनौट भइसकेका छन् । उनीहरुमध्ये एक जना आउँदो हप्ता आउट हुनेछन् भने वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाएका २ सहित पून उत्कृष्ट ७ ले प्रस्तुति दिनेछन् । प्रतियोगितामा अग्रज कलाकार सन्तोष पन्त, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, निर्देशक प्रदिप भट्टराई र चर्चित नायिका ऋचा शर्माले निर्णायकको भूमिका निभाईरहेका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।